Uri Kudanana A Boomerang Boyfriend?
Last updated: Chivabvu. 20 2019 | 2 Maminitsi verenga
"He anondida. Anondida kwete. "—kusazivikanwa
musikana wese akaita yazvakanyorwa mukomana uyu. Iye sehwakajairika Allergies yechirimo. Ladies, munoziva manyorero ...
Akafunga uswa yakanga nani mhiri. Kana iye "aida nzvimbo yake." Saka, pasina nyevero zvikuru, iye anoita kunyangarika chiito kuti aizoita kunyange Houdini vanozvikudza.
uchidanidzira. Muchifunga nei. Zvadaro pakupedzisira, vamwe nguva uye daro pakati penyu, iwe kushandisa kuporesa mwoyo wako uye mberi.
Zvakawanda yenyu kushamisika, Mwedzi / makore gare gare anodzoka. nguva iyi tsvuku Roses, kwokukumbira ruregerero, uye rinopisa chido kuzoita ekare mirazvo. Nguva zhinji, waita vava kufarira munhu mutsva.
The 64,000 mubvunzo anova ... Unofanira agomudzosera, kana uri mamwe nomusoro nyoro ramangwana?
tsime, zvose zvinobva ....
Heunoi vabiridzire jira KUSHANDISA senhungamiro.
Haana kuputsa mumwe mufundisi mitemo zvokufambidzana? Ava aisazova-nos kufanana kubiridzira neshamwari kana hama yako zvakanaka, kana chisimba, kana akatyorerwa ukavimba. kana zvakadaro, "Musapfuura kuenda."
Zvange nguva yakakwana yokuti kunge akakura kuti usakurirwe chii chakaitika? Ko iye chaizvoizvo vanoziva kurashika dzake? Kana ari zvichida chete kupanga chinhu chinozikanwa?
Nei kuda ukama kuti kuvandudzwa? Hazvinyaradzi nokuti kemisitiri pakati vaviri iwe aimbova inopisa? Anoda kukwereta mari kana pokugara? Kurerukirwa hakuna chikonzero chakanaka yokubatanidza. Musarega kuuya kwake musana kuva chipingamupinyi kwamuri.
Sei kugumisa zvinhu? Akanga nzira yake chando uye tsitsi? Kana mutsa uye vasiri mhosva? Semuyenzaniso, vakomana vanotora gwara wacho nzira nokugumisa zvose runhare kuonana kamwe kamwe, kana kukutumai meseji kuti kumigumo zvinhu kazhinji munokosha hooking pamwe zvakare.
Vaivapo zvakawanda zvakanaka nezvake kuti zvakaipa? Gadzira zvayakanakira nezvayakaipira nyora ipapo bvunza nokuchenjera uye tisingazvinyeperi. Most zvakakoshesa, titeerere ripararire zano Maya Angelou: "Kana vanhu kukuratidzai ndivanaani, tenda kwavari. "
Zvakafanana sezvo zvakakosha sezvo akapoteredza ezvinhu okurambana wako nguva. Akabatana bail panze pamberi Christmas? Mushure iwe akarwara kana pasi rombo yenyu? Vanhu vari "shamwari dzakanaka-Weathered" Kashoma kuti anogona kuverengwa iri panguva oma nguva. Funga pachako rombo kuti ndakawana kubva, kana zvakadaro. Cheka kurasikirwa kwako.
Musaputsa kunze Champagne magirazi chete asi. Funga akamuburusa shure ari "probationary nguva" ne "dzisina kuwana." Nokuti Zvakanyanya Kunaka Panguva nemigumisiro, ruvimbo inofanira "chichiwanikwa" kwete vaifungidzira.
Paunenge vakarambana, pakanga pane korasi vanhu That chiming vari, "Ndakuudzai kuti?" Kana vanhu vose vakafunga kuti akanga asina kukodzera iwe, pangava pfungwa pano. Regai dzinga ichi kurerutswa. Kunyange rudo kunogona kuva bofu, hazvifaniri kuva clueless wo.
Unogona kutenga wokubheja pfungwa dzako uye nokuzviremekedza zvakare?
Pane zvakajeka nguva apo kutora mukana kunogona kuva bheja akaipa. Uri Parizvino mumwe ukama rune vaizotibata zvinogona? In ichi ezvinhu, ari "kwakatangazve mbudzana" harifaniri kubvumirwa kudzoka!
Funga panguva yakakodzera Mazano aya pakubata Boomerang Boyfriend. Tichiyeuka kuti "Avo vanotadza kudzidza kubva kare vakananga kudzokorora izvozvo."
First Ichiyeukwa – Usernames
4 Matanho kutumira Akakwana First Message kuti Woman